बुढी आमै र तरुनीका कुरा
Monday, 11 Feb, 2019 11:59 AM
युद्धको समयमा एक सिमावर्ती गाउँमा दुश्मनको एउटा फौज घुस्यो । गाउँको सबै तरुनी केटीहरु उनीहरु सँग बच्न गाउँको बाहिर एउटा सुरक्षित ठाउमा भाग्न थालेछन, एउटा बुढी महिला पनि उनीहरु सँगै भाग्न थालिन ।
एउटा केटीले सोधिछन् आमा तपाईं किन भाग्नु भएको ? खतरा त हामी तरुनी केटीहरुलाई पो छ त ?
बुढीले भनिछन् : तिमीले देखिनौ त्यो फौजमा एउटा बुढा पनि छ !